Tennis – BMOI Premium Challenge: mpandray anjara anjatony hiatrika ny fifaninanana - ewa.mg
News - Tennis – BMOI Premium Challenge: mpandray anjara anjatony hiatrika ny fifaninanana
valanaretina ka tsy nahafahan’ny mpikarakara nanao ny fifaninanana
ny taona lasa, hiverina indray ny “BMOI Premium Challenge”
izay hotontosaina ny 25 sy ny 26 septambra ho avy izao. Mahatratra
anjatony ireo mpandray anjara hifaninana anatin’izany.
Lalaovin’olon-droa miaraka, misy amin’ireo mpifaninana no hilalao
miaraka amin’ny zanany izay efa kalaza amin’ity sehatra ity.
Noferana ho 30 minitra kosa ny faharetan’ny lalao iray. Ankoatra
izay, tsy nionona amin’io fifaninanana tokana io, hanatontosa
hetsika hafa isam-bolana hatramin’ny fiafaran’ny taona koa ny
mpikarakara hanoherana ny fotoana very tamin’ny fisian’ny
fihibohana noho ny Covid-19. Anisan’izany ny fifaninanana
nampitondrain’izy ireo ny anarana “Orange Team Trophy”
hotanterahina ny 13 sy ny 14 oktobra izao. Aorian’io, hisy edisiona
“Allianz Vintage Cup” ary hofaranana miaraka amin’ny
edisiona ho an’ny olon-tokana kosa izany.
L’article Tennis – BMOI Premium Challenge: mpandray anjara anjatony hiatrika ny fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 22/09/2021
Antanandrano: manana 6 ha ny Sinoa iray mpandraharaha
Any amin’ny fitsarana ny raharaha mikasika ilay tany eny Antanandrano Avaradrano, ankehitriny. Mifanolana aminy ireo mitonona ho mpandova sy ny orinasa misehatra amin’ny fifandraisan-davitra iray. Tonga hatreny amin’ny Antenimierampirenena ny raharaha, nahatonga ny raharaha teo amin’ny solombavambohaka iray sy ny minisitra iray ihany koa. Mitranga etsy sy eroa koa ny fanehoan-kevitra samihafa. Araka ny loharanom-baovao azo, misy Sinoa mpandraharaha efa manana velaran-tany 6 ha amin’ilay 30 ha, mikasa ny haka ilay velaran-tany manontolo ary heverina fa mety ho manohana ireo vondron’olona mitaky ny tany ihany koa.Tsiahivina fa nampahatsiahy ny minisitry ny Fitsarana ny tokony hamelana malalaka ny mpitsara hanao ny asany ankalalahana fa tsy tokony hisy ny fitsabahana na tsindry mivantana na ankolaka, araka ilay noteneniny hoe “intervention”.RandriaL’article Antanandrano: manana 6 ha ny Sinoa iray mpandraharaha a été récupéré chez Newsmada.
Nandritra ny taona 2020: maro ny ankizy latsaky ny 14 taona matin’ny aretina tazo
Ankizy latsaky ny 14 taona avokoa ny roa ampahatelon’ny (64,63%) olona matin’ny aretina tazo, ary ny iray ampahatelon’ny ankizy efa miditra an-tsekoly, araka ny fanadihadiana natao ny taona 2020. « Antony mitarika tsy fahatongavan’ny ankizy mianatra ny aretina tazo sady manimba ny fivoaran’ny sainy satria mamely ny atidoha ny tazomoka rehefa tafiditra ao amin’ny vatany », hoy ny tomponandraikitry ny serasera ao amin’ny fandaharanasa ady amin’ny aretina tazo, ny dokotera Ramanatiary Tiana, omaly teny Analakely. Mpivoy hafatra mahomby ny mpianatra ka mikarakara fifaninanana sary ho an’ny mpianatra eny amin’ny EPP sy ny CEG miankina na tsia amin’ny fanjakana ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ny minisiteran’ny Fanabeazana. Atao sary ny fomba entin’ny mpianatra sy ny ankohonany iarovana amin’ny aretina tazomoka. Distrika 41 amin’ny faritra 16 mbola ahitana tahan’ny aretina tazomoka ambony no hanatontosana ny fifaninanana. Tafiditra ao Antananarivo Renivohitra eto Analamanga. Tamin’ny andiany voalohany, natokana ho an’ny ambataronga voalohany fotsiny ny hetsika fa nampiana ny ambaratonga faharoa ho an’ity taona ity. Sekoly roa isaky ny distrika ary mpianatra mendrika ny hahazo ny loka aorian’ny fitsarana. Hatramin’ny 30 avrily ny fisoratana anarana. Sekoly 12 656 no entanina handray anjara raha 169 ny nandefa mpifaninana tamin’ny andiany voalohany. Nohavaozina ny lesona momba ny ady amin’ny tazo eny anivon’ny sekoly fanabeazana fototra fa natolotra koa ny minisiteran’ny Fanabeazana ny fanavaozana hoentina.Vonjy A.L’article Nandritra ny taona 2020: maro ny ankizy latsaky ny 14 taona matin’ny aretina tazo a été récupéré chez Newsmada.
Seho maro natsahatra: miantraika amin’ny fihariana ara-javakanto ny covid-19
Tao anaty herinandro voalohany amin’ny volana avrily…. Maro ny seho an-tsehatra tsy tanteraka noho ny hamehana ara-pahasalamana amin’ny firongatry ny valanaretina coronavirus indray eto Madagasikara. Niova avokoa ny fandaharam-potoan’ny mpanakanto sy ny mpikarakara lanonana, indrindra ireo mpanao “show case” na sehokely isaky ny faran’ny herinandro. Anisan’ny nofoanana tamin’ny ora farany, ohatra, ny hetsika “Jaolahy be” tetsy amin’ny La musica Ambodimanga Besarety, izay niarahana tamin-dry Romeo 3.0 sy ny ekipany, ahitana an-dry Brafalah, Amboara fitia, Jinn’s, Jhars man, ny asabotsy 3 avrily manomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Tao koa ny seho an-tsehatra niarahana tamin’i Davis sy ny namany, nokasaina hotanterahina ny zoma 2 avrily teo, tetsy amin’ny Karibotel Analakely. “ Henjana be ilay aretina fa aleo mitandrina tsara”, hoy ny tompon’andraikitra ao an-toerana. Natsahatra ihany koa ny seho izay nokasain’ny tarika Rheg hotanterahina any amin’ny faritra vakinankaratra iny vokatry ny valanaretina coronavirus hatrany. Etsy an-daniny, nanamafy ny ivontoerana fanaovana lanonana etsy amin’ny No Doze by Tranobongo Tanjombato fa hatsahatra ihany koa aloha mandritra ny fotoana tsy fantatra ny hetsika rehetra eny an-toerana hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus. Miantraika amin’ny fihariana ara-javakanto ny fisian’ity areti-mandoza ity ka aleo malina sy mailo hatrany, fa efa tena mitombo hery no ho ny tamin’ny taon-dasa ny covid-19, indrindra ny fisian’ilay “ Variant” avy atsy Afrika atsimo, amin’izao fotoana izao. Ankoatra izay, nisy ihany koa ireo mpanakanto lavon’ny coronavirus. Miarova vatana… Mandalo fahasahiranana ny mpanao zavakantoMandalo fahasahiranana ny mpanakanto mpanafana lanonana sy mpampandihy, indrindra ireo mpanao seho isaky ny faran’ny herinandro, noho ny fepetra ara-pahasalamana noraisin’ny fanjakana mahakasika ity valanaretina coronavirus ity, amin’izao fotoana.“Mikatona avokoa ireo toeram-pilanonana sy ny fanaovana karaoke, ny toeram-pandihizana, sns.. manomboka izao. Izany dia hisorohana amin’ny tsy fifampikasohana mivantana izay mety hiteraka fihanahana haingana amin’ny valanaretina covid-19. Tsy manana tongotra ka afaka mandehandeha ny tsimokaretina fa ny olona no mitondra azy”, hoy ny filoham-pirenena Rajoelina, nandritra ny fampitana mivantana ny toromarika hiadiana amin’ny valanaretina covid-19 tao amin’ny fahitalavitra malagasy, TVM, ny asabotsy 4 avrily lasa teo, tamin’ny 8 ora sy sasany alina, mahakasika ireo fepetra sy toromarika maro samihafa. Miandrandra vahaolana amin’ny fanohanana azy ireo mpisehatra ara-kolontsaina amin’izany, noho ny fahatapahan’ny hetsika sy asa fiveloman’izy ireo, na ny mpanakanto izany na ny mpikarakara lanonana.Nangonin’i NarilalaL’article Seho maro natsahatra: miantraika amin’ny fihariana ara-javakanto ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Cliquez sur l’image ci-dessous pour agrandir. 11048BA L’article Coopération Maurice-Indonésie-Madagascar a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Tetikasa Projermo sy BNI: tohanana ny tanora mandraharaha any ambanivohitra
Raikitra ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny tetikasa Projermo*, fanohanana ny tanora mandraharaha any ambanivohitra any amin’ny faritra andrefana, sy ny banky BNI Madagascar. Nifanaraka ny roa tonta fa hanome lanja ny fandraharahana any ambanivohitra.Eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana, sy ny jono ny tetikasa Projermo, tohanan’ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (Bad). Tohanana sy ampiana ny tanora mandraharaha any ambanivohitra amin’izay sehatra nosafidiny. Izay no tanjona iombonan’ny tetikasa Projermo sy ny BNI. Hamoraina ny fahazoana famatsiam-bola ho an’ny tanora 500 mandraharaha any ambanivohitra. Mipetraka ao amin’ny BNI ny antoka tahiry 10 miliara ariary amin’ity tetikasa ity. Azo raisina amin’ny ampahany, araka izay vokatra azo sy ny filàna amin’ny tetikasa.Hatramin’ny faran’ny taona 2021 ny fisafidianana ny tetikasa mahazo mindram-bola. Maharitra hatramin’ny dimy taona ny famerenana izany, zanabola 9,5 % isan-taona. Manampy amin’izao fiaraha-miasa izao ny sampana misahana ny orinasa madinika sy salantsalany (PME) ao amin’ny BNI Madagascar. Tohanana izay voafidy manomboka amin’ny drafitrasa sy ny fanatanterahana izany amin’ny fitantanam-bola. Ny tetikasa Projermo kosa, manampy amin’ny fanentanana ireo tanora sy hahamora ny fitiliana azy ireo. Ampirisihina koa ireo afaka mandray sy manohana ny tetikasa: ny manana milina, ny mikojakoja fitaovana, sns. Azo fidina koa izy ireny.Voly vary, katsaka, voanjo, fiompiana …“Kendrena any amin’ny faritra Bongolava sy Amoron’i Mania ny hanomezan-danja ny voly vary, katsaka, voanjo, fiompiana haingam-pihodina, sy izay fihariana hafa tsara ampiana. Hatevenina ny famokarana, ny fanodinam-bokatra, ny varotra, sns, amin’ireo fihariana ireo. Mifandraika amin’izany ny fiahiana ara-tsakafo sy fanatsarana ny fidiram-bola”, hoy Rason Davida, mpandrindra ny tetikasa Projermo.Mifanaraka amin’ny politika famatsiam-bola ny tetikasa, eo koa ireo teknisianina ao amin’ny banky, manampy ireo tanora amin’ny fandraharahany. “Ampiharin’ny BNI ny traikefa sy fahaiza-manao ho fanohanana ny fandraharahana amin’ny dingana rehetra ho fampandrosoana izany”, hoy i Alexandre Mey, tale jeneralin’ny BNI. R.MathieuProjermo* : Projet des jeunes entreprises rurales dans le Moyen Ouest L’article Tetikasa Projermo sy BNI: tohanana ny tanora mandraharaha any ambanivohitra a été récupéré chez Newsmada.
Fahafatesana :: Mpanao gazety iray matin’ny Covid-19
Voalaza fa lavon’ny valanaretina Covid-19, omaly, rehefa novonjena teny amin’ny hopitaly Anosiala Rakotoniaina Tolotra, mpanao gazety amin’ny haino aman-jery iray any Tsiroanomandidy. Iraika amby efapolo taona izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao ary namela manano tena sy kamboty iray. Nanaraka fitsaboana tany amin’ny hopitaliben’i Tsiroanomandidy Rakotoniaina Tolotra, nanomboka ny alatsinainy 13 jolay 2020, taorian’ny fahazoana ny voka-pitiliana miabo tamin’ny tsimok’aretin’ny Covid-19 taminy. Nandray ny fepetra rehetra, toy ny fampiatoana ny fandefasana fandaharana ny onjam-peo niasany. “Taizan’aretina diabeta izy sady voan’ny Covid-19. Efa nihatsara ny fahasalamany saingy nivadika tampoka ka nalefa niakatra taty an-drenivohitra. Tonga teny amin’ny hopitaly Anosiala izahay, halina (Ndrl: afak’omaly). Namoy ny ainy izy, ny maraina”, hoy i Volaniaina Tatienne Ninah, vadindRakotoniaina Tolotra, tamin’ny antso an-telefaonina omaly. Eny Ampangabe Ambohitrimanjaka no handevenana ny nofo mangatsiakan’ity mpanao gazety ity. Miara-ory sady mitondra ny teny fampiononana ho an’ny vady aman-janany sy ny havany izahay eto amin’ny gazety Ao Raha L’article Fahafatesana :: Mpanao gazety iray matin’ny Covid-19 est apparu en premier sur AoRaha.